१८ मंसिर २०७४, सोमबार २०:४३
म २० वर्षीया युवती हुँ । मेरो केटासाथीसँग यौनसम्पर्क भएको थियो । हामीले कन्डम प्रयोग गरेका थियौं र पछि वीर्य स्खलन भैसकेपछि कन्डमबिना यौनसम्पर्क गर्‍यौं, तर अहिले मेरो महिनावारी भएको छैन । महिनावारीको डेट पनि कटिसक्यो । मलाई डर लागिरहेको छ, कतै मेरो गर्भ त बसेन ? वीर्य निस्किसकेर यौनसम्पर्क गर्दा पनि गर्भ.....
कतै तपाईलाई क्यान्सर त भएको छैन ? यसरि थाह पाउनुहोस् सुरुवाती चरण
१६ मंसिर २०७४, शनिबार ११:४३
क्यान्सर, जसको नामबाटै हामी भयभित हुन्छौं । यो यस्तो रोग हो, जसको उपचार महंगो मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा असंभव पनि हुन्छ । असंभव कुन अवस्थामा त ? यसको विभिन्न चरण हुन्छ । जब अन्तिम चरणमा पुग्छ, रोग निदान असंभव हुन्छ । तमाम उपचार गर्दा पनि रोगीको जीवन रक्षा गर्न चिकित्सा विज्ञान असफल हुन्छ । त्यही कारण क्यान्सरदेखि.....
यौनसम्पर्क गर्दा हुने पीडा कसरी कम गर्ने
१५ मंसिर २०७४, शुक्रबार १९:३७
मलाई यौनसम्पर्क गर्दा साह्रै पीडा हुन्छ र उक्त कार्यमा संलग्न हुनसमेत मन लाग्दैन । - ६०६२० योनिद्वार वा भगक्षेत्रको छालाको समस्या हुन सक्छ । त्यसैगरी भगांकुरको संक्रमण वा शोथमा पनि यौनसम्पर्क पीडादायक हुनसक्छ । योनिद्वार वा Bartholin's Gland को संक्रमण पनि पीडाको कारण हुन सक्छ । मूत्रनली वा मलद्वारमा कुनै समस्या.....
१४ मंसिर २०७४, बिहीबार १५:५९
म २० वर्षीया युवती हुँ । म हप्तामा एकपटक यौनसम्पर्क गर्छु । ममा चाहना पनि छ कि म यौनसम्पर्क गरूँ, तर किन हो ममा उत्तेजना नै हुँदैन । शारीरिक रूपमा मलाई सम्बन्धका लागि कुनै समस्या छैन । के मैले कुनै चिकित्सकबाट जाँच गराउनुपर्छ ? के यो कुनै रोग हो ? - ०५६९३४ यौनेच्छा वा यौन व्यग्रता मानसिक तथा भावनात्मक जैविक.....
ग्यास्ट्रिक सम्बन्धि जानकारी
१३ मंसिर २०७४, बुधबार ०५:१२
ग्यास्ट्राइटिस कस्तो रोग हो ? ग्यास्ट्राइटिस अथवा वायुविकार हामीमध्ये प्राय: सबैको समस्या हो । हरेक मानिसलाई जीवनको कुनै न कुनै समयमा यो समस्याले सताएको पाइन्छ । धेरै नेपालीहरू यो रोगबाट पीडित छन् । ग्यास्ट्राइटिसको कारण के हो ? जीवनशैली तथा खानपान नै यसको प्रमुख कारण हो । धूम्रपान र मद्यपानका कारण.....
सेक्सप्रति अरुचि हुने मूख्य ५ कारण
१२ मंसिर २०७४, मंगलवार ०७:०६
मानव जीवनको एउटा महत्वपूर्ण एउटा पाटो हो सेक्स । अशिक्षा, अन्धविश्वास र कुण्ठित धारणका कारण मानिसहरु सेक्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । तर विश्व भरका अधिकत्तर मानिसमा सधैभरी सेक्सप्रति गहिरो रुचि रहन्छ । केहिँले त्यसलाई खुलारुपमा प्रकट गर्छन वा व्यवहार देखाउँछन भने केहिले यौन मनोकांक्षालाई दबाएर.....
लेखक गनेस पौडेलको ७७ को शरीर ६२ मा झर्यो, कसरि घटाउने ? १० सुझाब
११ मंसिर २०७४, सोमबार १५:१९
लेखक/उपन्यासकार गनेस पौडेलको एउटा फेशाबुक स्ट्याटस आयो "कोलेस्ट्रोलका विरुद्धमा कठोर अनुशासन कायम गरी ७७ केजीको ज्यानलाई ६२ केजीमा झार्न सफल भएको छु । अझै ७ केजी कम गर्छु र स्कुल पढ्दाको ५५ केजीमा बाँकी जिन्दगी चलाउँछु । अनि देख्लास् !" उनले आश्चर्यजन रुपमा आफ्नो तौल घाटाएको लेखेपछि उनका पाठकहरुले उनलाई.....
गर्भनिरोधक औषधि धेरै खाँदा के हुन्छ? –
११ मंसिर २०७४, सोमबार ०५:५५
म २९ वर्षीया विवाहित युवती हुँ । यौनसम्पर्क भएपछि आफूलाई शंका लाग्छ अनि म औषधी खान्छु— 72 dej । यो औषधी धेरै खाँदा के हुन्छ ? -मन्जु के–को शंका र कुन औषधी ? तपाईंलाई के कुराको शंका लाग्छ, पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन, तर यौनसम्पर्क भएपछिको कुरा गर्नुभएकाले गर्भ बस्यो कि भन्ने आशंका हुनुपर्छ । यही सन्दर्भमा.....